Minisitry ny fizahantany: raha te hanao firaisana ianao, aza tonga any Gambia, mandehana any Thailand!
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Gambia » Minisitry ny fizahantany: raha te hanao firaisana ianao, aza tonga any Gambia, mandehana any Thailand!
Ny minisitry ny fizahantany any Gambia Hamat Bah dia nampitandrina ireo mpizahatany tandrefana, izay mikasa ny hamonjy ny firenena mahantra atsy Afrika Andrefana mandritra ny vanim-potoana ririnina amin'ny fitadiavana fizahan-tany ara-pananahana, mba hialana amin'ny firenena.
“Tsy toerana fanaovana firaisana izahay. Raha mila toerana fanaovana firaisana ianao dia mankany Thailand. Tsy toerana fanaovana firaisana ny Gambia. Tsy izany, ary azafady ny Gambiana tsirairay dia tsy maintsy mihira an'io hira io. Tsy azontsika atao ny mahita ity firenena ity hiarina indray. Tsy maintsy miaro sy mitahiry ity firenena ity isika, ”hoy i Hamat Bah tamin'i Kerr Fatou, fandaharana nalefa isaky ny alakamisy tao amin'ny GRTS an'ny haino aman-jerim-panjakana.
Ny Gambia dia tsy toerana fanaovana firaisana ary tsy hisy izany, hoy hatrany Andriamatoa Bah. Nampitandrina i Bah fa izay mpizahatany rehetra, tratra 'mikorontana' amin'ireo zaza tsy ampy taona Gambiana, dia henjehina mandra-pahatongan'ilay lalàna.